Dadka qabo cudurka macaanka oo uu nuqul COVID -19 – iftiin fm
Dadka qabo cudurka macaanka oo uu nuqul COVID -19
July 27, 2020 Iftiin FM Reporter 0 Comment
Xarunta Maareynta Sonkorta ee DMRC ayaa sheegtay in dadka qaba cudurka sonkorta ay la dagaalami karaan cudurka covid-19 haddii sonkorta si fiican loo xakameeyo isla markana ay Maareeyaan heerka sonkorta ee dhiigooda.
Xarunta DMRC, ayaa sheegtay in heerarka sonkorta dhiigga ee sareysa ay tahay waxaa ugu weyn ee dadka qaba cudurka sonkorta uu nugleeya cudurka covid-19.
Aagasimaha Xarunta Maareynta Sonkorta ee DMRC Dancun Motany ayaa cabasha ka muujiyay warbixinada badan ee dadka sonkorta qaba ku cabsi galinaya in ay khatar ugu jiraan cudurka corona virus-ka.
Mr Dancun ayaa Wasaarada caafimaadka ugu baaqay in ay dadka sonkorta qabaan ay dhiiri gaalin siiyan isla markana ka wacyi galiyaan wararka been aburka ah ee iyaaga cabsi galiya.
Warbixin ay soo saartay Hay’ada Xiriirka Caalamiga ee Sonkorowga ee IDF ayaa sheegeysa in kenya ay ku nool yihiin 552,400 oo ruux oo qaba xanuunka sonkorta taasi oo uu dhiganta 2.2 boqolkiiba 25-ka Milyan ee ah dadka waaweyn ee ku nool dalka.
Hay’ada caafimaadka adunka ee WHO ayaa sheegtay in dadka waayeelka ah iyo dadka qaba xaaladaha caafimaad sida dhiig karka, cudurada wadnaha, cudurada sambabaha, kansarka ama sonkorowga ay aad ugu nugul yihiin cudurka corona virus-ka.
← Madaxweyne Kenyatta oo la kulmaya barasabyada ismaamulada dalka
Shirkada Mpesa Foundation oo Cudurka Corona la dagaalameyso →